Azo alaina amin'ny Thunderbird 13 | Avy amin'ny Linux
Azo alaina ao amin'ny Thunderbird 13
Toy ny mahazatra, eo akaikin'ny fivoahan'ny Firefox 13, ho avy ny fanombohana ny kinova mitovy amin'ny an'ny mpanjifa mailaka Mozilla Thunderbird.
Ireo fanovana izay ho hitantsika amin'ity kinova ity (nadikan'ny tovolahy avy amin'ny Firefoxmania) tsy dia misy dikany:
Ny mety hisian'ny mandefasa rakitra lehibe ary tsy mitraka izy ireo noho ny fiarahana amin'ny YouSendIt, izao dia halefa amin'ny serivisy fitehirizana an-tserasera sy ny rohy alefany amin'ny namanao. Ho ampiana mpiara-miasa fanampiny amin'ny famoahana amin'ny ho avy.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'i Gandi sy Hover, afaka manao izany isika izao misoratra anarana ary mahazo adiresy mailaka anao manokana miaraka amin'i Thunderbird. Miaraka amin'ny adiresy mailakao vaovao, Thunderbird dia hamboarina ho azy ary vonona handefa sy handray hafatra. Amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amin'ny mpamatsy hafa izy mba handrakofana faritra maro eto amin'izao tontolo izao ary hanolotra safidy bebe kokoa amin'ny ho avy.
ny fangatahana ambany indrindra Ny rafitra ho an'ny Windows dia Windows XP Service Pack 2 na taty aoriana.
maro fanamboarana fiarovana.
Azonao sintonina avy amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Azo alaina ao amin'ny Thunderbird 13
Merlin The Debianite dia hoy izy:
Ary ny Icedove rahoviana izy ireo no hanavao izany ho an'ny sampana fitiliana?
Valiny amin'i Merlin The Debianite
Nanaitra ahy ilay kaonty mailaka namboarina ary nanandrana aho. Araka ny nieritreretako azy, inona no ataon'ny Thunderbird dia ny fisoratana anarana sehatra vaovao miaraka amin'ny iray amin'ireo mpamatsy roa lazainao ary mamorona kaonty mailaka miaraka amin'izany sehatra izany. Miaraka amin'ny gandi.net dia mitentina US $ 15.50 isan-taona, ary amin'ny Hover.com kosa dia US $ 20.00.
Ataoko fa ho tsara ho an'ireo izay maniry ny mandeha ho azy ny zava-drehetra; Na dia, mazava ho azy, latsaky ny US $ 10 (miaraka amina kaody fampiroboroboana) dia azonao atao ny manoratra sehatra iray ao amin'ny orinasa iray fantatra amin'ny anarana hoe GoDaddy na Name.com ary mampiasa azy io hananganana kaonty mailaka miaraka amin'ny Google Apps sy ny kalitaon'ny Gmail (iza no mahalala hanao ahoana ny gandi.net sy ny Hover.com).
Ny tombony azo avy amina olana raha manao zavatra ianao. 😀
Niezaka nanova ny solontenan'ny mpampiasa chromium araka ny voalazanao aho saingy tsy niasa ho ahy izany, andao jerena raha misy afaka manampy ahy
Salama Pan afaka mampiasa extension
Mandragor dia hoy izy:
Ny marina, amin'ny serivisy web an'ny hotmail, gmail, sns, hitako fa tsy dia misy dikany firy amin'ireo mpitantana mailaka ho toy ny lozisialy avy amin'ny rafitra fiasa, ary mahita ireo vaovao vitsivitsy isaky ny famoahana vaovao an'i Thunderbird, Mozilla dia tokony hieritreritra ny hampita azy any aminy ilay tetikasa. amin'ny vondrom-piarahamonina ary ampifantohy amin'ny Firefox ny loharanonao rehetra.
Mbola manantena aho fa toa ny rano amin'ny volana Mey ilay interface vaovao ho an'ny vokatra marin'i Mozilla, Australis, hanatsarana ny tsy fitovizan'ny maso Thunderbird, zavatra tsy fahita hatramin'ny fanovana farany.
Mamaly an'i Mandragor
seadx6 dia hoy izy:
Izahay ao amin'ny Solus OS dia efa manana izany ao amin'ny toerantsika, eto izahay mamoaka kinova vaovao an'ny Firefox sy Thunderbird ora vitsy taorian'ny nampakarina azy tany amin'ny FTP izay iray na roa andro alohan'ny hivoahan'ny fanambarana ofisialy ofisialy 🙂
Valio ny seadx6
Ao amin'ny Arch Linux dia efa nanomboka ny 5 Jona ihany koa. 😛
LDD: Mageia 2 misy
Linus Torvalds vs fanitarana Gnome